Ururada Bulshada Rayidka oo la kulamay Guddoonka Labada Aqal iyo Guddiga Doorashooyinka – Kalfadhi
Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa shalay kulamo gaar-gaar ah la yeeshay Ururada Bulshada Rayidka, kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saaray doorashooyinka dalka Soomaaliya ee sannadkan 2020/21.
Guddoomiyaha Ururada Bulshada Rayidka Tahliil Shaatax oo hoggaaminaya xubnaha Bulshada Rayidka, ayaa Guddoonka ka codsaday in xaaladdaha siyaasada ee dalka Soomaaliya oo hadda kacsan la dejiyo, islamarkaana xal laga gaaro khilaafyada jira.
Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Cabdi Xaashi C/llaahi, ayaa dhankooda ballanqaaday in is afgarad laga gaari doonno doorashooyinka dalka oo lagu mursan yahay, waxaana ay labada guddoon ay u soo jeediyeen inay xaliyaan khilaafka dhexdooda ah.
Dhinaca kale, Ururada Bulshada Rayidka, ayaa la kulmay Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka, waxaana ay la wadaageen in doorashada noqoto mid heshiis ku yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda.
Ururada Bulshada Rayidka, ayaa dhawaan waxaa ay ku baaqeen in xaaladda siyaasada ee dalka Soomaaliya aan lagu celinin sidii laga soo gudbay, waxaana ay Madaxweyne Farmaajo ay ka codsadeen in door odaytinimo ah uu xaaladda ku dhammeeyo.